Kooxda Al-Saadicuun Bil-Xaqi Oo Qabtay Kulan Ay Kaga Hadlayaan Su’- Aalo Bulshadu Iska Waydiisay Fikirkoo-da Iyo Waxa Ay Aaminsan Yihiin | FooreNews
Home wararka Kooxda Al-Saadicuun Bil-Xaqi Oo Qabtay Kulan Ay Kaga Hadlayaan Su’- Aalo Bulshadu Iska Waydiisay Fikirkoo-da Iyo Waxa Ay Aaminsan Yihiin
Kooxda Al-Saadicuun Bil-Xaqi Oo Qabtay Kulan Ay Kaga Hadlayaan Su’- Aalo Bulshadu Iska Waydiisay Fikirkoo-da Iyo Waxa Ay Aaminsan Yihiin
Muqdisho, February 10, 2018- (Foore)- Kooxdii sannadkii hore lagaga dhawaaqay geyiga Soomaalida ee Al-saadicuun Bil Xaq ayaa waxa ay bilaabeen Khudbado ay ku sheegeen in ay ku caddaynayaan su’aalo badan oo Bulshadu iska waydiisay markii ay ku dhawaaqeen Jamaacadooda iyaga oo sheegay in ay wax badan umadda u caddaynayaan kuwaasi oo habeen walba oo Jimce ah u doortay in ay dhallinyarada si gaar ah ugu bartilmaameedsadaan Baraha Bulshadu ku kulanto ee Internetka.
Dhawr wadaad oo kooxdan ka mid ah ayaa habeen hore oo Jimce soo galayay waxa ay ka hadleen dhawr arrimood oo la xidhiidha ujeedooyinka ay u taagan tahay Jamaacadoodan cusubi iyo su’aalihii ka dhashay markii lagu dhawaaqay waxaanay sheegeen in aanay kalidood islaam ahayn ee ay ku dhawaaqayaan in laga tago wax kasta oo shirki iyo gaalnimo keenaya.
Kulan ay ugu yeedheen kulanka koowaad ee ay arrimahan ku faahfaahinayaan waxa ugu horrayn ka hadlay Dr. Yuusuf Axmed Hiraabe waxaanu yidhi: “Maadaama aan muddo dacwadda soo wadnay oo umadda wax badan u soo caddaynay oo aan xaqaa’iqda dacwaddayada aan soo caddaynaynay taasina keentay in is waydiimo badani dadka ka yimaddeen inkasta oo aannu wax badan caddaynay haddana bulshadu waxa ay xaq u leedahay in aannu wax badan u caddayno. Waa barnaamij ujeeddiisu tahay ka jawaabidda su’aalaha ka soo yeedhay Bulshada. Markii aannu nidhi waxa aannu nahay Jamaaco Muslimiin ah waxaa la is waydiiyey oo nala waydiiyey ma kalidiin ayaa Muslimiin ah?”.
Intaa kadib waxa isna hadalka qaatay Dr. Cismaan Cabdulle Rooble oo su’aashaasi ka jawaabaya, waxaanu yidhi: “Hore ayaannu u sheegnay oo waxaannu nidhi waxaanu nahay Jamaaco Musliniinta ka mid ah. Dad gaar ah oo ujeedo leh ayaa yidhi kalidood ayaa Muslimiin isu haysta. Xaqiiqada islaamka ayaannu umadda u cadaynanay ee annagu kalidayo Muslimiin ma nihin. Islaamka dadku afka ka sheeganayaan wax badan oo ka qaldan baa jira iyaga oo waliba isla toosan. Kanaa Muslim ah iyo kanaa gaal ah ujeedadayadu ma ahayn”. Dr. Cismaan Cabdulle oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Mushkiladdu waxa weeyi waxa laga yaabaa in qofku iska yidhaa diimaha kale oo dhammi waa khalad annagana Muslim baan nahay. Laakiin waxa nuxurka ahi waxa weeyi Islaamka lagaa rabaa waa in aad is dhiibto oo aad Muslimino isku dhiibto. Waxa aannu arkaynay marka aan u soo dagno nolosheena caadiga ah shareecadii Ilaahay oo taalla oo shay kasta uu ku dhammays tiran yahay inta laga tagay ayaa sharciyo kale iyo qawaaniin kale iyo Distoorro kale la dagsaday iyadiibaana la isu dhiibay oo noloshii oo dhan waxa kala hagayaa ma aha sharcigii Islaamka. Islaamkii macnihiisu ahaa is dhiibid ayaa waxa ay isku dhiibeen qawaaniin iyo distooro kale”.
“Jamaacada Al-saadicuun Bil Xaq waxay aad isugu dayday in ay caddayso shirkiga dadku ku dhici karaan ee ku dhex faafsan umaddeena oo iyaga oo islaamka afka ka sheeganaya islaamnimadoodu hallaysan tahay”. Ayuu yidhi sheekh kale oo arrinkan ka hadlayay.
Sidoo kale Dr. Sheekh Doon ayaa isna yidhi: “Islaamnimada qofku sheeganayo iyo noloshiisu in ay kala duwanaadaanbaannu ka digaynaa. Waxaa Jira Arrimo badan oo aan hore dood looga qabin oo maanta la diiddan yahay ayaa jira sida talada horta yaa iska leh. Yaa dhulkan ka taliya. Yaa bani aadamka u taliya. Yaad wax ka qaadanaysaa yaad wax ka diidaysaa”. Ayuu yidhi Dr. Sheekh Doon.
Previous PostMadaxweyna Buurnidiisu Hadal Hayn Badan Dhalisay Oo La Ogaaday Sababta Uu U Naaxay Iyo Dhakhtarkiisa Oo Daaawo Lagu Caataynayo U Soo Saaray Next PostSiyaasi Maxamed Xaashi Oo Muuse U Soo Jeediyay Inuu Laalo Wadahadaladii Soomaliya,Sheegayna In Madaxda Somaliya Ku Jiraan Kuwo Ka Qayb Ahaa Xasuuqii Jaziira